Mihevitra lalàna vaovao hanakanana ny tambajotra sosialy i Kazakhstan · Global Voices teny Malagasy
Mety hanakana ny asan'ny tambajotra sosialy ao Kazakhstan ny fepetra famerana vaovao.
Voadika ny 31 Oktobra 2021 4:49 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Italiano, Español, Ελληνικά, English
Vonona ny hametra ny fahalalahan'ny aterineto ny famerana vaovao ho an'ireo orinasan-tserasera ao Kazakhstan. Sary: “DSCF4899″ avy amin'ny Бесплатный фотобанк, nampiasana lisansa CC BY-NC-SA 2.0
Nandany volavolan-dalàna ny parlemanta ao Kazakhstan, “hiarovana ny zon'ny ankizy,” izay hametra ny fiseraserana ataon'ny orinasan'ny media sosialy, farany indrindra tamin'ireo hetsika maro namerana sy nifehezana ny media sosialy ao amin'ny firenena.
Any Kazakhstan, mahatonga ny tolotra fandefasan-kafatra toa ny Telegram sy Signal, ankoatra ny WhatsApp, Messenger, ary Instagram izay an'ny Facebook, ho fomba hifandraisana, hampielezana vaovao, ary amin'ny tranga sasany, hanaovana hetsika ny fidirana amin'ny aterineto miely patrana, noho ny tsy fahatokisana firy ny fampitam-baovao nentim-paharazana.
Hanery ireo orinasan'ny tambajotra sosialy mba hanala ny votoaty nomarihan'ny manam-pahefana ao an-toerana ho manimba ny ankizy ao anatin'ny 24 ora ny tolo-panitsiana ny lalàna momba ny “Fiarovana ny Zon'ny Ankizy“. Hiteraka fanakatonana tanteraka ny tolotra ny tsy fanarahana izany.
Nilaza i Aidos Sarym sy Dinara Zakiyeva, solombavambahoaka ao amin'ny antokon'ny fitondrana Nur-Otan, fa tsy mikendry ireo orinasan'ny tambajotra sosialy ny hetsika ataon'izy ireo. Ny tanjon'izy ireo voalohany, hoy izy ireo tamin'ny fampahalalam-baovao , dia ny hanalavirana ny ankizy amin'ny votoaty mety manimba.
Nilaza i Sarym fa “zava-dehibe sy manan-danja kokoa noho ny tohan-kevitra momba ny ‘fanakatonana ny tambajotra sosialy” ny tolo-kevitra fanitsiana hafa ho an'ny lalànan'i Kazakhstan izay nolaniana tamin'ny volavolan-dalàna.
Ahitana ny fanerena ireo orinasan'ny tambajotra sosialy hanokatra birao ao amin'ny firenena ary hanoratra anarana amin'ny fomba ofisialy ny orinasan'izy ireo ny volavolam-panitsiana hafa. Tsy mahazo misolontena an'ireo orinasa ireo amin'ny fomba ofisialy ny vahiny sy ny vahiny monina maharitra ao an-toerana.
Tao amin'ny lahatsoratra Facebook, nilaza i Zakiyeva fa mifanaraka amin'ny fanao manerantany izany hikendrena manokana ny fiarovana ny ankizy.
Voalohany, tsy ho olana amin'ireo orinasa lehibe ny fanokafana birao solontena. Faharoa, efa fanao manerantany izany, ampiharina, ohatra, any Frantsa, Alemaina, sy any amin'ny firenena maro hafa. Tiako ihany koa ny manamarika fa nodinihin'ny sampan-draharahan'ny governemanta rehetra ireo fanitsiana ireo ary natolotry ny governemanta ao anatin'ny rafitry ny vondrona miasa amin'ny resaka fiarovana ny ankizy amin'ny fitandrohana amin'ny aterineto.
Nankatoavin'ny parlemanta Kazakhstan ireo fanitsiana andian-dalàna rehefa nodinihana indray mandeha monja, manambara izany fa mihevitra ny governemanta fa ilaina io fepetra io. Tsy maintsy mila ny sonian'ny Filoha Kassym-Jomart Tokayev ny volavolan-dalàna mba hanan-kery.
Nampiasaina ho antony fanampiny ho amin'ny lalàna henjana kokoa ny angondrakitra momba ny famonoan-tenan'ny tanora. Nilaza i Nurlan Nigmatullin, filohan'ny antenimieram-pirenena, tamin'ny antsafa fa olona miisa 143 latsaky ny 18 taona no namono tena tamin'ny taona 2020, ary 105 kosa namono tena nandritra ny enim-bolana voalohany tamin'ny taona 2021. Nasongadina ho anisan'ny antony lehibe mahatonga ny famonoan-tenan'ny tanora ny fandrahonana sy ny fitandrohana an-tserasera.
Hafa kosa ny fanazavana nomen'ny masoivohon'ny ONU ho an'ny ankizy UNICEF: “90 isanjaton'ny tanora namono tena farafahakeliny no hita fa tratran'ny rari-tsaina sy tsy maharitra.”
Nindrana ny tenin'ny minisitry ny atitany Yerlan Turgumbayev ny mpampahalala vaovao mpiaradia amin'ny governemanta Kazakhstanskaya Pravda izay nilaza fa “avy amin'ny fifandirana amin'ny ray aman-dreny na fianakaviana ny iray ampahatelon'ny tranga fikasana hamono tena.”
Hetsika hanaronana ny fanaraha-maso henjana
Nilaza tamin'ny Kloop ilay mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona Tatyana Chernobil fa mety ho fomba iray hanitarana ny fanaraha-mason'ny fanjakana amin'ny serasera ireo fepetra ireo.
Tena midadasika ny natioran'ireo fanitsiana ireo ary mihoatra lavitra noho ny tombontsoan'ny ankizy. Saika azo apetraka eo ambany fiarovan'ny zaza avokoa ny zavatra rehetra amin'ny aterineto.
Andro vitsivitsy taorian'ny nankatoavan'ny parlemanta ny fanitsiana voalohany, namoaka ny tatitra momba ny ‘Fahalalahana amin'ny aterineto’ izay fanao isan-taona ny mpanara-maso iraisam-pirenena Freedom House, izay anehoana an'i Kazakhstan ho firenena “tsy misy fahalalahana”.
Tamin'ny volana Desambra 2020, nataon'ny governemanta andrana ny Taratasy fanamarinana momba ny fiarovam-pirenena, teknolojia MITM ahafahany manara-maso ireo hetsiky ny mpisera an-tserasera, ao Nur-Sultan. Nahatonga ny sehatry ny media sosialy maro tsy ho azon'ny mpisera nidirana raha tsy nitroka ilay taratasy fanamarinana ny andrana.
MITM (na hoe olona eny anelanelany), dia teknolojia ahafahan'ny governemanta manara-maso ny zotra ao amin'ny aterineto avy amin'ny toerana manelanelana ny mpisera sy ny voatoaty. Miverimberina nandritra ny taona maro io karazana fanafihana MITM io ary tsy nanaiky izany ny tranonkala maromaro goavam-be mba hiarovana ny mpisera avy amin'ny fitsikilovan'ny governemanta. Nisongadina miharihary ihany koa i Kazakhstan tao amin'ny Tetikasa Pegasus, fanadihadiana momba ny rindrambaiko fisovohana ‘soavaly Trojan’ izay napetraka tamin'ny fitaovan'ny mpanao gazety, mpikatroka ary mpanao politika maro ao amin'ny firenena.
Ankoatra ny fanaraha-maso mieli-patrana, nanasongadina ny anjara asan'ny sivana ataon'ny manampahefana isaky ny misy votoaty manafintohina amin'ny fantson'ny tambajotra sosialy ihany koa ny tatitry ny Fahalalahan'ny Aterineto.
Mampiasa fomba tsy ara-teknika isankarazany ny manampahefana hanamafisana ny fanesorana votoaty, ao anatin'izany ny fanerena mivantana ireo mpamoaka vaovao hanala ireo votoaty manokana ary nisy fitakiana mitovy amin'izany ihany koa nikendrena ireo sehatry ny tambajotra sosialy iraisam-pirenena.
Nanatsonga tatitra tamin'ny taona 2019 ny Freedom House, izay nilazan'ny Minisiteran'ny Serasera fa “fitaovana tsy ara-dalàna mihoatra ny 25.000 no nofafan'ireo tompo na mpitantana tranonkala” tao anatin'ny 10 volana. Matetika iharan'ny lamandy na sazy an-tranomaizina any Kazakhstan ny mpisera izay mamorona na mifanerasera amin'ny votoaty toy izany.
Nisy ny lalàna mifehy mitovy amin'izany any Rosia tamin'ny volana Febroary niaraka tamin'ny tanjona hanara-maso mitohy ireo orinasan'ny tambajotra sosialy.
Mety hiteraka fepetra henjana amin'ireo orinasan'ny tambajotra sosialy izay tsy mifanaraka amin'ny sivana ataon'ny governemanta ny fanaraha-maso mieli-patrana toy izany.